Codsi deynsi oo ku saabsan Iibsi iibsiga Baska EGO | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraCodsiga deynta ee Igad Iibinta EGO Baska ayaa laga wada hadlay
16 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Codsiga amaahda ee iibsashada baska ego ayaa laga wada hadlay
Codsiga amaahda ee gorgortanka iibsiga baska ee EGO; Kulamadii ugu dambeeyay ee bishii Diseembar Golaha Ankara ee Magaalada Ankara waxaa lagu qabtay shir gudoominta Madaxweyne Mansur Yavaş.
Kulankii ka dhacay hoolka shirarka ee dawlada hoose iyo halka ay shacabku muujiyeen xiise weyn; Agaasinka Guud ee 'EGO General' 245 CNG'li bas iyo 28 naaftada naaftada iyo cutubyada 2 ee buuxinaya mashruuca dhismaha saldhigga '60 milyan oo yuuro oo loogu talagalay isticmaalka amaahda shisheeye ilaa Qorshaha Euro iyo Guddiga Miisaaniyadda ayaa laga wada hadlay.
Kulankan, AK Party, MHP, CHP iyo GOOD Party oo madax ka ah kooxda Ankara ayaa ka faa'iideysan doona dhammaan go'aannada si wanaagsan loo muujiyey, iyagoo sheegay inay u adeegsan doonaan codeynta ajendaha.
Duqa magaalada Yavaş wuxuu uga mahadceliyay wakiilada xisbiga mucaaradka aqbalida aqlabiyada kahor codeynta wuxuuna yiri: toplam Deynta guud ee degmada waa 8,5 billion TL. Marka hore, waxaan rabaa inaan halkaan ku bilaabo ”, wuxuu sharxay sababta ay u doonayaan amaahda. Isaga oo ka jawaabaya dhalleeceynta ka imaanaysa xisbiyada mucaaradka, ayuu Madaxweyne Yavaş yiri, orum waan kugu hambalyeynayaa go'aankaan faa iidada Ankara waxaanan u mahadcelinayaa qof walba oo shaqsi ahaan gacan ka gaystay.
AAN AYAA CALIILKA AYAA KA SAAMEEYAAN HALKAN HALKAN
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Ankara Mansur Yavaş ayaa adeegsaday weedhahan soo socda markii uu sharraxayay sababaha loo codsaday amaahda:
“Waxaan u imid deynta 8,5 bilyan ee TL. 52 milyan ginni waxaan bixinayaa dulsaarka lacagta aad qarashgareyso. Isagu kuma filna 10 milyan oo rodol inta uu bixinayo tareenka dhulka hoostiisa mara, hadda waxaan bixinaa 15 milyan ginni bishii. Marka waxaan bixinaa 120 milyan ginni sanadkii. Isaga laftiisu kuma filna 400 milyan rodol SSI deynta waqtigii la soo dhaafay. Dhammaanteen hoos ayey nooga yimaadeen. Waxaad dooneysaa inaan lahaado wax la mid ah sanadihii lasoo dhaafay. AK Party iyo kooxda MHP inay dhahaan kuwan soo socda; 'Waxaad noo keentay annaga oo amaahda'. Maxay ahaayeen sababaha keenay amaahda? Xusuusnow, waxaa jiray shilal baabuur oo ka dhacay isgoyska Çayyolu. Mashruuc kale oo boulevard ah, Istasyon Street, oo isku xira degmooyinka Etimesgut iyo Sincan, sii wadida Ankara Boulevard, ayaa la keenay maxaa yeelay waxay ahayd mid deg deg ah. Ama waxaan ku qaban karnay shan sano, sax? Iridda Konutkent, oo ku taal Dumlupınar Boulevard, waxay hadda ku taal horteeda jaamacadda Başkent, Şaşmaz Sanayi Sitesi, oo xiriirisa Fatih Sultan Mehmet Boulevard iyo Dumlupınar Boulevard. Tani waa meesha dadku marwalba ku xanuunsadaan. Sadex sano ka dib, aan deynsado, laakiin aan sida ugu dhaqsaha badan aan u qabanno. Halkan nolol iyo geeri midna kuma jiraan. Waxaan dooneynaa 700 milyan oo ginni oo loogu talagalay dayactirka deg-degga ah ee lagu sameeyay waddooyinka laga sameeyay tuulooyinka ka hor doorashada iyo inuu khasaari doono hadana hada way fiicnaan laheyd hadii aan waligeed sidan la sameyn. Waxay yiraahdaan inaad bixiso deynta qandaraasleyaashii hore isla markaana aad bixiso sheegashada shaqaalaha, waxaadna yareynaysaa dalabka 700 milyan ginni oo loo geyndoono 400 milyan ginni, laakiin waan sameyn doonnaa sidaas. Waxaan sameyn doonaa Istasyon Street iyo dhamaan baahiyada. ”
"ISKU DIYAAR KARO AMMAAN"
Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay jiraan sababo kale oo codsigooda deynta ah, Duqa Magaalada Yavaş wuxuu yidhi, kadar anigu kaligay waxaan raacaa Miiska Buluugga ah ilaa fiidnimada. Cabashooyinka ugu badan ayaa ka yimid EGO. Waxaa jira cilado yar. Tirada basaska runtiina hoos bay u dhacday. Baskeena maalin walba ee 30-40 wuxuu ku jiraa dayactir. Sidaa darteed, kharashaadka ku baxay waa sare. Nabadgelyo naf ayaa jirta. In kasta oo celceliska da'da basku uu yahay 6 adduunka oo dhan, waxaan haysannaa 10. Wixii ka dambeeya Disember waxay noqon doontaa 11. Markaa xaalad degdeg ah ayaa jirta. Waxaan helnay deyn ku habboon. Mudane Madaxweynuhu wuxuu leeyahay, 'lacag ha naga weydiisan, raadso sumcaddaada dibadda.' Waan helnay. 1 wuxuu leeyahay deeq ah € milyan oo euro, oo lagu daray 2 waxay leedahay dib u dhac sanad-dhaaf ah iyo muddada sanadka 10. amaah No sida Turkiga. Haddii aan degmada ka heli lahayn laba kun oo bas, ma aysan ahayn mid loo baahnaa. Ma dooneynno inaan baabi'inno basaska oo aan weydiisanno basas cusub. Taasi waa mid ka mid ah sababaha aan u dalbanay amaah. Looma baahna in lagu murmo isaga. Waan soo qaban doonaa degmada hadii Eebbe idmo. Haddii aad ku kasbato khasnad bishii 7, ma heli doontid lacagtaas ..
LACAG LA'AAN '439 MILLION LIRA OO UGU DANBEEYEY IN AY KU SAMEEYAAN DHAQAALAHA'
Duqa magaalada Yavaş wuxuu cadeeyay inuu leeyahay ahmiyadaha ugu horeeya u adeegida Ankara wuxuuna yidhi, “Ahmiyadaydu waa caafimaadka dadka, nolosha dadka iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. Xisaabta waxaan kahelay qeybta suuxinta ee magaalada. Waxaa jira lacag lagu isticmaalo sanamyo kala duwan. 342 milyan ginni ayaa qarash gareeyay. Sawirkani wuxuu u dhigmaa baska 457. Waardiyayaashu waxay u dhigmaan baska 7 iyo bisaduhu waxay u dhigmaan baska 1. Qalabka dhismaha ee qalabka loo yaqaan 'Diinosaur iyo camouflage' oo ah shaqada dhismaha baska 26. Waxa kale oo jira iridaha laga soo galo ANKAPARK, kuwaas oo u dhigma basaska 95. Wadarta guud ee 439 milyan oo ginni oo lacag ah ayaa ku baxay maalgashiyo dhintay. Waxaa naga lunsaday baska 586. Dadka barafka jiilaalka, qoraxda ku sugaya baska hoostiisa, dhibaato kadhacda aniga oo aan ku bixin lacag iyo wax kale toona ”ayuu yiri. Madaxweyne Yavaş wuxuu sii waday khudbadiisa sida soo socota:
Waxay dhahaan; Waxaad keydisay 350 milyan oo rodol. Haa, waan yeeli doonnaa. Waxaan haynaa xaraash furan. Waxkastoo waa hufan. Waxaad sheegtay shirkaduhu inaysan laheyn xisaab, waan siinaynaa. Dhamaan asxaabteyda golaha ayaa ka heli kara warbixinteyda maalinta 200 oo ay ka helaan macluumaadka ay ka doonayaan unugyada ay rabaan. Waxaan ula xisaabtamay xisaabtankooda. Maxay tahay sababta aan deyn u bixinno marka ay jiraan malyanno 350 ah? Ma ogtahay sababta? Godku waa weyn yahay, aadna u weyn yahay. 350 kuma xirna milyan. Marka 350 uusan ku xirneyn milyan, waxaan dooneynaa lacag baahiyahaas oo kale. ”
QARAXII LAGU SAMEEYAY
In kasta oo amaahda loo isticmaalay iibsashada basaska cusub, arrinta ayaa mar kale lagaga wada hadlay Qorshaha iyo Miisaaniyadda Guddiga si looga hortago wixii dhibaato sharci ah ee nidaamka ka jira waxaana la go’aamiyay in loogu yeero kulan aan caadi ahayn oo ka socda Golaha.
Dhamaadkii kulanka, Madaxweyne Yavaş wuxuu gacan qaaday asxaabta xisbiyada siyaasadeed wuxuuna ugu mahadceliyay mid mid.
Sharaxaadda EGO ee Shaqaale-ku-beddelayaasha Inoperative ee Magaalada Stations
Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda: Shirkadda 'BB BB' ma lahayn codsi oggolaansho deyn ah oo loogu talagalay shirkadda 'Metro'
Codsiga Deynta ee Iibsashada EGO Baska